संघीयताको मज्जा ! — News of The World
संघीयताको चर्को मज्जा बढ्न थालेको छ पाठकबृन्द । संघ प्रदेश र स्थानीय तहका वडा समेत गर्दा बिसौं हजार हात्ती पाल्नु परेको प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।
स्थानीयतहमा विलासी गाडी किनेर मस्ति गरेको समाचार कसैले छिपाउन नसक्ने गरी बढेका छन् । पछिल्लो दृष्टान्तका रुपमा बाँकेको डडुवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकामा भएका बेथितिहरु बाहिर आएका छन् ।
कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत वनारसी प्रसाद हरीजनले आफ्ना उपमेयरलाई स्कुटर, तेल र आवस्यक पर्दा गाडी भाडामा लिएर चढ्ने छुट दिएको बताएका छन् । बाँकेको डडुवाका प्रमुख नरेन्द्र चौधरीले त आफूलाई ६३ लाख ५० हजारको गाडी र वडाअध्यक्ष तथा कर्मचारी गरी १५ वटा मोटरसाइकल खरिद गरी उदार दिल देखाइदिएका छन् ।
कतिपय स्थानीयतहका पदाधिकारीले गाडि पनि किन्ने र छोरा, पति, व्वाइफ्रेन्ड वा नातागोतालाई ड्राइभर नियूक्ति गरी तलब दिएका छन् रे । संघीयता के का लागि भनेर घोत्लीने पाठकबृन्दलाई कर्केनजरले भन्छ, नियत त यो थिएन नी, होइन र पाठकबृन्द ?
खाडीका देशबाट भन्दा बढी रेमिट्यान्स अमेरिकाबाट आयो